ट्राफिक वेथिति कहिले रोक्ने ?
विशेषत मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि सुरु भएको इन्धनको अभाव अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।
यहा“ चल्ने सार्वजनिक, संस्थागत, नीजि र सरकारी गाडी सडकमा गुड्न न्युन भएको छ । जसका कारण आ—आफ्नो काममा जाने सर्वसाधारणलाई अफ्ठेरो भइरहेको छ । जनता बाध्य छन्, बल्ल बल्ल पाइएको सवारीमा कोच्चिएर बाध्यात्मक यात्रा गर्न ।
उनीहरुलाई जसरी भएपनि आफ्नो काममा पुग्नु पर्ने भएकाले जसरी भएपनि यात्रा गर्नु पर्ने भएको छ । त्यसैले उनीहरु खुट्टा टेक्नसम्म पाएमा गाडीभित्र छिरिहाल्छन् । त्यसबेला उनीहरुलाई ध्यान हु“दैन, यो गाडीको मान्छे बोक्न सक्ने क्षमता कति हो ?
क्षमता भन्दा धेरै यात्रु चढेमा गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । एक त पहाडको बाटो, दोस्रो इन्धन नपाएकाले रुटमा चल्ने जति गाडी चल्न नसकेर पातलो चलेका गाडीमा खचाखच भरिएर चढेका यात्रुका कारण क्षमता भन्दा बढि भएर थाम्न नसक्दा मंगलबार मात्रै रसुवाको राम्चेमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना भयो ।
जसबाट तीन दर्जन बढिले ज्यान गुमाए । यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नपर्ने तथा गाडीबाललाई पैसा कमाउन पर्ने कारणले सार्वजनिक सवारी साधन खचाखच भएपनि त्यसको नियमन गर्न सरकारी निकाय छ ।
त्यो हो सुरक्षा निकाय । त्यसमा पनि ट्राफिक प्रहरी । तर, इन्धन नपाइएको निहु“मा आजभोली ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधनले क्षमता भन्दा बढि यात्रु चढाएमा र ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा कानुन अनुरुप कारवाही गर्दैन । फलतः सवारीसाधनले गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले गैह्कानुनी रुपमा यात्रु बोक्ने काम गरिरहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी सडकमा गुड्ने सवारी साधनलाई कानुनको अधिनमा रहेर यात्रा गर्न आदेश दिने र त्यो आदेश र कानुनलाई अटेर गर्नेलाई कानुन अनुरुप कारवाही गर्ने काम हो । उ त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायीत्वबाट कुनैबेला पनि उम्कन पाउ“दैन । चाहे त्यो इन्धनको अभावका बेला होस् ।
चाहे त्यो चाडवाडका बेला होस् या कुनै उत्सवमा होस् । तर, अहिले ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको छ, इन्धन अभावको निहु“मा कानुन विपरित काम गर्न सार्वजनिक सवारी साधनलाई दिइरहेको छ ।
यसले ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, रसुवामा मंगलबार भएको दुर्घटना । जहा“ ३५ जनाको ज्यान गयो भने ४५ जनौं घाइते भए ।
यो घटना ट्राफिक प्रहरीको कमजोरीका कारण भएको हो । त्यसैले सरकार र नियामक निकायले ट्राफिक प्रहरीले विस्तारै छाडेको कामको पुन उसलाई ट्रयाकमा ल्याएर वेथिति रोक्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
बाम एकताका चुनौती
कहिले पाउँछ सरकारले पूर्णता ?
ओली गठबन्धनको अग्नीपरिक्षा
राष्ट्रपतिको कदम र कांग्रेसको विरोध
प्रदेश नामकरण कसरी गर्ने ?
स्वराज भ्रमणमा ओली अपरिपक्वता
प्रदेश सरकारबाट पाइने सुविधा
विद्यार्यी भर्ना अभियानमा जुट्दै
प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएकाले केही काम गर्न सकिएन : मुख्यमन्त्री पौडेल
कांग्रेसभित्र अन्तरघातको विजारोपण झाङ्गियो, अब सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ : कांग्रेसका नेता उपाध्याय
dancing troupe perform
एकल महिलालाई घर हस्तान्तरण
स्याङ्जा सदरमुकाममा हजारका नक्कली नोट भेटियाे
मनमोहन अधिकारी स्मृति दिवस
काठमाडौँमा फोटो पत्रकारको प्रभातफेरी